बढ्यो हवाई भाडा, हेर्नुहोस् कुन ठाउँको कति बढ्यो ? - ramechhapkhabar.com
बढ्यो हवाई भाडा, हेर्नुहोस् कुन ठाउँको कति बढ्यो ?
वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडा बढाएका छन्। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेपछि वायुसेवा सञ्चालक संघले बुधबारबाट लागु हुनेगरी हवाई भाडा बढाएको हो। काठमाडौं सबैभन्दा लामो रुट धनगढीका लागि ८४० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। काठमाडौं–धनगढी रुटमा वृद्धि भएर अधिकतम भाडा १६ हजार ८०५ रुपैयाँ पुगेको छ।
काठमाडौंबाट सिमराका लागि बढेर अधिकतम ४ हजार १९५ पुगेको छ। भरतपुर रुटमा ४ हजार ९३५ रुपैयाँ पुगेको छ। काठमाडौंदेखि पोखराको पाँच सयले बढेर अधिकतम ७ हजार नजिक पुगेको छ। जनकपुर रुटको ५ हजार ७९५ पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल आयल निगमले आइतबार रातिदेखि इन्धनमा चरम मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै चारपटक मूल्यवृद्धि भएको छ । आइतबारको मूल्यवृद्धिपछि पेट्रोल प्रतिलिटर रु १९९ बराबर पुगेको छ । बैठक सुरु भएलगत्तै नेकपा(एमाले)का सांसद पद्मा अर्यालले नागरिकको ढाड सेक्नेगरी मूल्यवृद्धि गरिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले पेट्रोलपम्पमा स्टक राखेर मूल्यवृद्धि गरिँदा ठूलो आर्थिक लाभ हासिल भएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट उचित जवाफ नआउँदासम्म सदनको कारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद अर्यालको उक्त मागपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकारलाई उचित जवाफ दिन निर्देशन दिनुभयो । यस्तै उहाँले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा समेत आर्थिक अनियमितता गरिएको आरोप लगाउनुभयो । यस्तै सोही दलका सांसद लालबाबु पण्डितले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावमाथि हालसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । सोही दलका सांसद जगतप्रसाद सुनारले बाढी, पहिराका कारण कास्कीका विभिन्न स्थानमा वितण्डा मच्चाएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सोही पार्टीकै सांसद गणेश पहाडीले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीमाथि यही असार ४ गते मिनभवन क्याम्पसमा आक्रमण गरिएको बताउनुभयो । सांसद सरिताकुमारी गिरीले न्यायको माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेकी निहारिका राजपूतका सम्बन्धमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले स्थानीय निर्वाचनका क्रममा दोलखामा भएको घटनाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।